Haddii aad Mac aan jawaab sida ugu dhakhsaha badan ay bari ahaan jirtay, aad u baahan tahay si aad u nadiifiso. Sida aad u isticmaalaan, cayn kasta files khasnado ahaan. Badankoodu kuwo aan macna lahayn. Tani article hoos ku qoran wuxuu kuu sheegayaa nooca files khasnado lagu nadiifin karin, halkaas oo iyaga yihiin iyo sida loo nadiifiyo.
Qaybta 1. Leaks ku saabsan files, kaas oo la nadiifin karin, ee Mac System!
Qaybta 2. Waa maxay file Cache
Qaybta 3. Raadi files Cache ku saabsan Mac Nidaamka!
Iyadoo barakooyinka waxyaalaha horumarka farsamada isbeddeleen. Casriga ama kombiyuutarada noqday qalabka reerka caado u ah dadka oo casri ah iyo dad noqdaan tiirsan qalabka. Waxaa ka mid ah casriga ugu dambeeyey ama kiniin ah, iPhone, iPad ama computer Mac ah sida MacBook Air waa doorashada ugu fiican iyo qiimaha iyaga u!
Inta badan dadka soo food dhibaatooyin virus in qalabka Windows ku salaysan iyo in ay u wareegeen badan dunida Windows u dhalaalaya, smart Mac adduunka! Mac waa si dhakhso ah, user-friendly oo caan ku ah xasiloonida iyo isku halaynta. The Mac OS X, ayaa waxa horumariyay Apple Inc. ah & waxaa loogu talagalay oo kaliya Apple computer oo ay la socdaan waxyaabaha kale ee Apple. Dadka waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan Mac sababta oo ah macaanaa laakiin muddo ka dib Mac la noqon karaa mid gaabis ah & dubtey ama dadka ka heli karaan meel lagu kaydiyo yar qalabka! Dadka waxaa laga yaabaa in raadinaya jawaabta sababta Mac ayaa noqonaya mid gaabis ah & gaabis ah oo ay la socoto guuldarro meelaha lagu keydiyo! Jawaab waa mid aad u fudud, sababtoo ah haddii aad isticmaasho Mac si firfircoon & joogta ah ka dibna waqti ka Mac la cunaysa more & khayraadka xusuusta badan oo ah meel bannaan ah qalab lagu kaydiyo oo la hakad Mac ah!
Khasnado Sida caadiga ah waa in meesha oolin wax ku meel gaar ah. Haddii aad isticmaasho browser kasta, barnaamijyadooda ama software wax ka dibna waxa ay ka dhigeysa in faylasha qaar si ku meel gaar ah oo ku saabsan qalab aad si aad si deg deg ah u heli karaan waqti ka dib. Tusaale ahaan haddii aad soo booqato bogga kasta oo isticmaalaya Safari browser ka dibna waxa uu ka tagi doono qaar ka mid ah files khasnado si aad u heli karto bogga mar kale si deg deg ah la isticmaalayo files khasnado halkii server asalka. Waxaa jira noocyo kala duwan ee files khasnado kuwaas oo naga caawiyay inaan si habsami leh u shaqeeyaan iyo badbaadinta waqtigeena by Goldogob gaadiidka oo dheeraad ah. Computer kasta daraan noocyada kala duwan ee files khasnado sida khasnado user, khasnado luqadda, khasnado nidaamka log, web khasnado, khasnado browser, khasnado xasuusta, app khasnado, khasnado disk, iwm si loo hagaajiyo waxqabadka ama in ay sii wadaan si fiican. Laakiin muddo ka dib, kuwaas oo files khasnado Korka bannaan ee kaydinta Mac ah! Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay in ay nadiifiso files khasnado ka yimid Mac.
Shaki kuma jiro in Macs effortlessly ordi! Laakiin waxaad u baahan tahay in ay sii Mac in qaab wanaagsan sida makiinadaha kale! Haddii aad qaadato qiyaas yar oo ka hortag ah masruufka Mac Mac markaas aad ku ordi doonaa si habsami aad u! Waxaad ku dedejin kartaa ilaa aad Mac by nadaafadda files khasnado inta badan. Waxaa waxba uma dhimi doono nidaamka laakiin dedejin doonaa Mac ah.
Waa arrin aad u sahlan looga heli karo & hubi files khasnado ku saabsan nidaamka Mac ah! Waxaad ka heli kartaa & hubi files khasnado nidaamka Mac ay la socdaan daalacashada internetka isticmaalaya fursadaha menu u dhiganta.
Tallaabada 1. Riix "Finder" icon, riix magaca isticmaalaha ee "Places". Waxaad ka heli doontaa liiska fayl sida "Library", "Desktop", "Music", iwm suuqa kala Finder ah
Tallaabada 2. Riix "Library" folder. Waxaad ka heli doontaa liiska-fayl sub & waxaad ka heli doontaa "maylka adag" folder ee liiska-gal sub ah.
Tallaabada 3. Press arrow bidix ee ah "maylka adag". Waxay muujiyaan oo dhan files khasnado oo ka mid ah codsiyada lagu rakibay on your Mac OS X.
Tallaabada 4. Hadda Xaqa riix "maylka adag" & dooro "Get Info" doorasho. Window A muujin doonaa baaxadda, Jidka ay weheliyaan sifooyinka kale ee folder.
Tallaabada 5. Riix "Hard Drive" icon (yaalaan "Qalabka" qaybta & cinwaan looga dhigay "Macintosh HD") uu furmo suuqa Finder ah. Waxay muujin doonaa set cusub ee fayl ay ku jiraan "Codsiyada," Library "iyo" Users ".
Tallaabada 6. gala "Library" folder iyo aad u hesho waxyaabaha ku jira. Muddo this "Library" liiska folder aad u heshaan karo "maylka adag".
Tallaabada 7. Hadda dooro "Edit" & "Dooro All" ama Dooro mid mid khasnado files.
Tallaabada 8. Jiid oo dhan oo ka mid ah waxyaabaha soo xulay in ay qashinka. Waayo, kanu password maamulaha ayaa loo baahan yahay. Haddii aad rabto in aad tirto faylasha khasnado si joogta ah ka dibna tirtirto fayl ama faylasha ka qashinka.
Tallaabada 9. Waxaa fiican in aad dib uga bilowdo nidaam dib marka la tirtiro files khasnado ka Mac ah.
Waxaad ka heli doontaa noocyada kala duwan ee files khasnado ka mid ah noocyada soo socda ee files khasnado aad Mac.
User files khasnado: Haddii aad adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac muddo dheer ka dibna dhammaan codsiyada firfircoon abuuray files khasnado ay OS X Mac ah iyo goolka meel lagu kaydiyo. Your codsiyada abuuray maylka adag ay ku shaqaynayaan siman iyo qaar ka mid ah kuwo waaweyn ee size. Haddii aad si fiican looma isticmaalayo codsiyada ka dibna waa in ay tirtirto files khasnado iyo aad u hesho qaar ka mid ah meel bannaan oo lacag la'aan ah. Waxaad ka heli doontaa files user khasnado Maktabadda ~ / / meesha ay ka abuuray oo si fudud u kala cadeeyo karo files khasnado ee gacanta.
Marka hore aad u baahan tahay si ay u tagaan si ay "u tag gal" menu garaacida Command + Shift + G ka Mac OS X Desktop. Markaasay aad u baahan tahay in nooca ~ / Library / maylka /. Hadda waxaad tirtiri kartaa dhammaan faylasha khasnado ama tirtiri kartaa files khasnado codsi gaar ah gacanta. Just raadiyo magac codsiga, ka heli codsiga iyo tirtirto faylasha khasnado codsiga gacanta ama riixi kartaa Amarka + Delete in ay u diraan si ay qashinka iyo dibadda qashinka adigoo gujinaya "Trash faaruqa ah" doorasho.
Language files khasnado: Inta badan codsiyada ku jira in ka badan dersin faylasha af gaar ah ku saabsan Mac. Inta badan files afka waa aan waxtarka kuu lahaan sababtoo ah aadan ugu luqadaha hadlo! Files noocan oo kale ah waxaa lagu lumin meel lagu keydiyo oo ku saabsan Mac ah & aad si nabad ah uga saarto karaa kuwa files luqad aan loo baahnayn ka Mac gacanta.
Waxaad ka heli doontaa files afka ee Resources u gal dhamaanayey "lproj" oo ay weheliyaan magaca buuxa ama gaaban luqadaha sida ja.lproj, fr.lproj, ru.lproj, en.lproj, iwm Waxaad u baahan tahay in ay doortaan fayl af aan loo baahnayn oo kaliya riix tirtirto ama ka saar button. Ka sokow, waxaad dooran kartaa & qashinka fayl afka ka Mac OS X gacanta.
System log files khasnado: Guda kala duwan qabtaan tallaabada codsiyada nidaamka iyo waxyaabaha. Files Kuwaas waxaa la soo diri karaa ku dhiirigelinayaan in uu u saxo qaraarada haddii garaacaa codsiga. Mararka qaarkood files log sida ku jira macluumaad badan oo & qaado meel Mac. Sidaas aad nadiifin kartaa faylasha khasnado nidaamka log oo ka heli kartaa meel ka mid ah.
Haddii aad rabto in aad tirtirto nidaamka log sida faylasha khasnado ka dibna la furo suuqa kala finder ah, hel menu Tag oo dooro "Tag gal" doorasho. Hadda waxaad u baahan tahay inaad ku qor / Library / Log & riix gala in la sii wado in la gal. Dooro dhamaan faylasha & ka dhacay + amar Backspace si aad u nadiifiso faylasha khasnado nidaamka log. Ka sokow, aad nuqul karaan wax walba oo ay folder kala duwan ee ammaan kuu ah. Hadda riix "Trash faaruqa ah" doorasho, haddii aad rabto in aad tirtirto faylasha khasnado nidaamka log si joogto ah.
Waxaad sidoo kale ka heli kartaa qaar ka mid ah nidaam faylasha log khasnado in folder / var / logga. Ka sokow, codsiyada nidaamka qaar ka mid ah sida mail ku kaydsan iyaga u gaar ah khasnado nidaamka log gudbiyo meelo kale ee aad Mac.
Web khasnado files: Haddii aad ku shuban, webpage wax ka dibna browser hore ka dhacay website-ka server la xiriira iyo bogga furo. Ka sokow, browser dukaamada nuqullada dukumantiyada webpage ee si aad si toos ah bogga internetka ka heli karaan, si dhaqso ah oo mar kale mustaqbalka. In mar dambe browser ma u baahan tahay inaad ku shuban website-ka server sababtoo ah files khasnado shaqo samayn doonaa. Haddii aad files web khasnado nadiif ah xilliyo ka dibna loo siiyaa biraawsarkaaga shaqeeyaan badan oo hawlkarnimo.
Safari: Safari browser waxaa loogu talagalay oo kaliya Mac. Muddo Safari helo files khasnado iyo noqdo gaabis ah. Haddii aad rabto in aad nadiifiso files khasnado ka Safari ka dibna la furo Safari ah, guji Safari bar menu iyo Dib u celi Safari. Waa in aad hubisaa in aad ka hubisay dhamaan xogta website iyo Dib u celi. Safari tirtiri doonaa oo dhan files khasnado.
Laakiin weli waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah files khasnado ee Safari ku on your computer. Sidaas daraaddeed haddii aad u baahan tahay in ay tirtirto files khasnado gebi ahaanba ka kombiyuutarka tirto faylasha khasnado ee gacanta. Files khasnado Qaar ka mid qarsoomi kara X. Mac OS Just furo Finder oo fur menu Go ah. Hoos & heli galka Library in menu hoos-hoos. Fur galka Library, dooro folder khasnado ah, ka heli & furo "com.apple.Safari" folder oo la helo "cache.db" file. File ka dhaqaaq Trash ama tirtirto faylka si joogto ah.
Google Chrome: Sida Safari haddii aad rabto in aad nadiifiso chrome Chache google faylasha gacanta ka dibna tag galka ~ / Library / maylka / Google / Chrome. Haddii aadan heli files khasnado meel gaarka ah ka dibna waxaad eegi kartaa ~ / Library / Codsiga Support / Google / Chrome si aad u hesho oo aad u nadiifiso files Cache.
Firefox: Haddii aad dareensan tahay in aad Firefox uu noqday dhacsan markaas wax ugu horeysay ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad nadiifiso Firefox files khasnado ku kaydsan aad Mac. Waa arrin aad u fudud, dooro profile ~ / Library / maylka / Firefox / Taariikh / & ka profiles heli files khasnado iyo tirto faylasha ah. Ka sokow, waxaad ka heli kartaa meel files khasnado 'oo ay adakaanayso si ku saabsan: khasnado.
App khasnado files: barnaamijyadooda Sida caadiga ah ku rakiban dhalin tiro badan oo files khasnado. Sidaas waxaa wanaagsan in ay tirtirto faylasha app khasnado oo app aadan isticmaalaya! Waxaa laga yaabaa inaad ku rakibi app Spotify ku saabsan Mac waxaana laga yaabaa in aan la isticmaalin app muddo dhawr bilood ah! Laakiin app Spotify ayaa ahbaa ku saabsan 1,38 files khasnado GB on Your X. Mac OS si fudud in aad nadiifin kartaa files khasnado iyo ka heli kartaa meel bannaan oo lagu kaydiyo oo bilaash ah! Just tagaan si ay gal maylka adag, ka heli menu View ah, ku dhacay + amar J ama aad u hesho "Show View Options", ka heli galka khasnado doonayo iyo tirto faylasha khasnado ee gacanta. Waxaad ka heli kartaa & tirto faylasha app khasnado aan loo baahnayn socda tallaabooyinka.
WordPress khasnado files: DropBox files khasnado qaadan kartaa meel lagu kaydiyo 10GB on your computer. Your Mac noqon karaa gaabis ah & laga yaabaa in aad dhibaato meel lagu kaydiyo. In xaaladda sida aad gacanta ku nadiifin kartaa DropBox files khasnado. Waxaad ka heli doontaa files khasnado sida in /users/you/.dropbox/cache.
Just tagaan meesha oo ka guurto files khasnado in ay qashinka iyo ka helo meel bannaan oo lacag la'aan ah.
iPhoto files khasnado: Marka aan meeshaba oolin qalabka mobile la computer ka dibna si hannaanka looga dhigo .Wadashaqayntaas si degdeg ah Mac koobi sanamyada & koobi kuwanu waa iPhoto files khasnado. Ka dib markii u hagaagsan oo sanamyada iPhoto files khasnado noqday aan waxtar lahayn, maxaa yeelay waxa ay dhalin doontaa cusub files khasnado iPhoto waafajinta nuqul cusub ee images. Tag folder ee sawirrada. Markaas riix gacanta & riix file iPhoto Library. Waxaa furi doonaa menu cusub oo aad u. Raadi ee "Show Xirmada Tusmada" ka menu cusub muuqday & riix it on. Hadda ka heli khasnado folder iPhoto ah & dhaqaaqo gal ah in qashinka ama tirtirto gal. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in aad ka heli kartaa file u maktabadda meelo kale haddii aad horey u guuray meesha uu file aad Mac.
Tag folder ee sawirrada. Markaas riix gacanta & riix file iPhoto Library. Waxaa furi doonaa menu cusub oo aad u. Raadi ee "Show Xirmada Tusmada" ka menu cusub muuqday & riix it on. Hadda ka heli khasnado folder iPhoto ah & dhaqaaqo gal ah in qashinka ama tirtirto gal. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in aad ka heli kartaa file u maktabadda meelo kale haddii aad horey u guuray meesha uu file aad Mac.
Lugood files khasnado: Mar kasta oo aad ka ciyaari clips music, buugaag maqal ah ama caleenta waxyaabaha ku Lugood markaas Lugood badbaadiyay macluumaadka la xiriira in files khasnado on Mac ah. Haddii aad tan u sameeya si joogto ah markaas aad mashiinka waxa la siiyaa mugga weyn ee files khasnado. Files Kuwani waxay keeni kartaa dhibaato aad nidaamka iyo aad u baahan tahay si aad u nadiifiso files khasnado ee gacanta. Inta badan Lugood files khasnado waa Lugood faylka Library & laga yaabaa in laga helo meel kale ku disk adag.
Just furo Lugood ah & heli bar menu garaacida "Alt-X". Hel menu Edit iyo dooro "rabtid". Hadda waxaad u baahan tahay in la helo "Advanced" tab & riix "Dib u celi Cache" button ka dibna riix OK kaliya in ay tirtirto files Cache.
Data files khasnado: Haddii aad la ciyaareyso kulan ka dibna waxa uu abuuri doonaa faylasha khasnado xogta ku saabsan Mac. Laakiin muddo ka dib files khasnado sida laga yaabaa inay noqdaan kharribeen & aad dhibaato arrintan. Haddii aad haysato dhibaato sida aad Mac ka dibna aad u baahan tahay si aad u nadiifiso faylasha khasnado xogta ka Mac gacanta. Haddii aad u aragto ciyaarta Warcraft ah & doonayaan in ay tirtirto khasnado xogta faylasha kaliya raacaan tilmaamaha soo socda:
Waxaad u baahan tahay in ay maraan si / Codsiga / World ee Warcraft /. Hadda fur folder Data & heli fayl Cache ku. Dooro fayl khasnado iyo dhaqaaqo fayl in ay qashinka & tirto faylasha khasnado ah si joogto ah.
Ha iloobin in aad bilaabi Mac nadiifinta files khasnado ka dib sababta oo ah Mac abuuri doonaa files cusub & cusub khasnado mar hawlgalka siman! Waxaad ka heli kartaa & tirtirto nooc kasta oo ka mid files khasnado gacanta ka OS X Mac ah ama waxaad isticmaali kartaa wax software xisbiga saddexaad si ay shuqulka aad waayo si joogto ah! Waa dhab ahaantii ammaan ah Mac in ay tirtirto wax ka "Cache" folder, sababtoo ah waxaa ku siin doonaa qaar ka mid ah meel lagu kaydiyo oo bilaash ah & horumari doona qaab Mac aad u.
> Resource > Mac > Nadiifi Mac: Waa maxay la nadiifin karo on Mac iyo sida loo nadiifi